Zvese nezve Bias Lighting - MediaLight Bias Mwenje
Zvese nezve Bias Lighting
Zvita 1, 2021
Nyamavhuvhu 8, 2021
Kutaura nezve kubatira mwenje pane iyo Murideo chiteshi
MediaLight Mutungamiri uye General Manager, Jason Rosenfeld anogara pasi naJason Dustal weMurideo kuti vakurukure zvakaenzanisirwa D65 bias mwenje pamwe nebasa rayo mune yakaenzanisirwa imba yemitambo.
Ndeipi kureba kwekusarudzika mwenje yandinoda yeTV yangu?
Mhoroi apo! Kunyangwe iwe ukawana MediaLight kana LX1 bias mwenje, iwe ungangodaro unoshamisika kuti yakareba sei tambo iwe yaunofanirwa kuwana yako kuratidza. Unogona kushandisa Calculator iyi! Inoshandira ese maMediaLight uye LX1, uye yakavakirwa pa ...
Tinowana uyu mubvunzo zvakanyanya, uye ini ndoda kupa mamwe maonero. Kutanga, rega ndingo taura kuti kana iwe uri wekutapa vhidhiyo vhidhiyo, iwe unonyatsoda kuve neakanyanya kutonga pamusoro penzvimbo iwe yaunogona kuve nayo. Izvi zvinosanganisira zvinotaridzika-zvakadzika ...
Kushungurudzika Kwemaziso uye OLED: Chokwadi ndechekuti Zvakanyanya
Ndeipi nzira yakanaka yekubvisa OLED kudzvinyirira kwemaziso? Isa kuvhenekera mwenje. Kana iwe uri nyanzvi colorist kana vhidhiyo mupepeti, iwe unoziva kuti ziso kushushikana kunogona kuve kwakanyanya kutonyanya neOLED pane kune kumwe kuratidza tekinoroji. Asi kana uchingo ...
MediaLight 6500K Yakafananidzirwa D65: Referensi Yemhando, ISF-Certified Yakatemerwa D65 Bias Mwenje
Kuisa mwenje wekusarudzika mumusha wako wemitambo haufanirwe kunge uri dambudziko, asi kazhinji ndizvo. Kunze kwemachubhu e-fluorescent, ayo anga ari mainstay kwemakore, pakave nesarudzo shoma dzakapa chaicho CIE chiyero ...
Kuvhenekera mwenje sosi yekuvhenekera iyo inouya kubva kuseri kwechiratidziro chako, ichivandudza mashandiro anoita TV yako kana tarisiro, nekupa chirevo chisingachinjiki cheziso rako. (Ini handisi kutaura nezvezvitsva zvemavara emagetsi eLED anotendeuka ...